China Commercial Ice Cream Ngosipụta Ngosipụta QD-BB-12 ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Nenwell
Azụmahịa Ice Ude Ngosipụta Ngosipụta QD-BB-12
Azụmahịa azụmaahịa a na-eji ihe eji agba ure eme ihe iji gosipụta gelato ma ọ bụ desserts na ụlọ ahịa ma ọ bụ n'èzí.
Ihe ngosi a na-agba agba bụ nha a ma ama site na nhọrọ Nenwell ice cream friji nhọrọ. Maka mgbasa ozi ka mma, ụdị a nwere ike ịbụ omenala na akara ngosi, akwụkwọ mmado na ọbụlagodi ọkụ ọkụ n'ime kọfị iji bulie ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gị maka ị nweta ahịa ndị ọzọ.
Dị ka ọkachamara Ice Ice Display Cases, nke a bụ ezigbo mgbanwe na teknụzụ teknụzụ ice cream. Ọ bụ ya mere Nenwell ji ewepụta naanị ya, ihe dị elu, jikọtara ya na gburugburu obibi banyere mmata teknụzụ na-azọpụta ike. Dika ihe eji edozi ihe di iche iche emeputara maka mpaghara di iche iche puru iche site na okike, Nenwell na-agbali mgbe nile iwebata ulo nkpuru ude ice cream na ulo ahia achicha n’ime odi n’ihu site n’inye teknụzụ na-edozi. Ezubere kabinet ahụ iji nye njikọta na-akparaghị ókè, yana iji hụ na enweghị ihu ọhụụ maka ngwaahịa ice cream. Igwe iko na-ewe iwe. The unit abịa zuru ezu na a sọrọ evaporator na sọrọ airflow jụrụ maka zuru okè okpomọkụ equalization.
Igwe ihe nracha ice cream a bụ ezigbo ngwakọta nke ihe na-eme na nkwado. Maka ndị ọzọ, jiri obiọma kpọtụrụ anyị n'efu.
Nke gara aga: Fan Cooling n'obi Glass achicha ngosi Ngosipụta
Osote: -20 ~ -40ºC Ultra ala okpomọkụ ụlọ nyocha Biomedical friza
1. Ugboro abụọ nwere ike iko anwụrụ na defogging wires.
2. Na ama ika Compressor, ngwa ngwa kefriza ọsọ na elu mmepụta.
3. Njikwa eletrọniki nwere ike idozi ịdị ike nke apịtị snow.
4. Ikuku jụrụ oyi.
5. Obere uda.
6. Ikanam ìhè n'ime maka visibiliti ngwaahịa.
7. N'ime nchebe ugbu a na nchedo ọkụ dị ala.
8. Mpụga Ọdịdị: iko eriri mesikwuru plastik.
Compress Embraco / Danfoss
Ihe onwunwe Igwe anaghị agba nchara na iko
Igwe nju oyi R404A
Sistemụ jụrụ Ikuku jụrụ oyi